Gaas iyo Axmed Cali Xaashi oo Madaxtooyada ku Shiray – Radio Daljir
Gaas iyo Axmed Cali Xaashi oo Madaxtooyada ku Shiray
Nofeembar 9, 2015 5:41 b 0
November 09, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed ayaa aqalka madaxtooyada Puntland ee Garoowe ku soo dhaweeyey gudoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo si dimuqraadiyad ah ugu guulaystay doorashada .
Madaxweynaha ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in doorashadii maanta ee Baaralamaanka ay u dhacdo si cad oo muuqata , islamarkaana ay tahay guul iyo horumar ay gaareen shacabka Puntland.
\_’\_’ Umadda Puntland meelkasta oo ay joogaan waxaa ay kaa rajeynayaan dadaal ,ka shaqeynta horumarka iyo midnimada Puntland, Golaha wakiilada waxaa ay ka rejyn in shaqadii loo idmaday sidii ay aheyd u gutaan \_’\_’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas .
\_’\_’ Sidoo kale waxaan u hambalyeyn xildhibaanadii kale ee tartamay , xilkasnimo ayey muujiyeen , guushana dabcan mar hadii la tartamo qof ayaa ku guulaysta , xildhibaanadana waxaan u rajeyn kheyr \_’\_’ Ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa u mahadceliyey gudoomiyihii hore ee Golaha wakiilada Puntland Siciid Xassan Shire , oo uu ku amaanay dadaalki shaqo ee uu soo qabtay mudadii uu xilka hayey.
\_’\_’ Doorashadii maanta ka dhacday Baarlamaanka waxaa ay muujinaysaa dimuqrasiyadda gaamurtay ee ay Puntland ku talaabsatay , bisaylka siyaasadeed ee ay gaareen sidoo kale shacabku \_’\_’ Ayuu yiri Madaxweynuhu.
DHAGAYSO:Magaalada Bosaaso oo Roobsatay
DHAGAYSO: Barlamaanka Puntland oo Gudoomiye Cusub Yeeshay